Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment मेरो देशका नेतामा मानव प्रवृत्ति भन्दा दानव प्रवृत्ति बढी [विचार] - Pnpkhabar.com
मेरो देशका नेतामा मानव प्रवृत्ति भन्दा दानव प्रवृत्ति बढी [विचार]
-राजा चन्द ठकुरी
हामी २१ औं सताब्दी मा बाचिरहेका छौँ। जहाँ अनेकौ बिकासका साथै होडबाजी गर्दै एक अर्कालाई पन्छ्याएर अगाडी बढ्ने क्रममा छौँ भने किन मेरो देशका नेता भनेर परिचित ब्यक्तिले फेरी त्यही जनयुद्ध र जंगलबाट जाने अभिव्यक्ति दिएर जनता डराउनु हुन्छ ? यदि तपाईमा खुबी छ भने केही गरेर देखाउनुस नत्र कुकुर जस्तो नभुक्नुस, धेरै भुक्ने कुकुरले कहिल्यै टोक्दैन । त्यो कुरा सम्पूर्ण नेपालीलाई अवगत नै छ । हिजोको १० वर्षे जनयुद्धकालमा पनि तपाईले त्यही हत्या र हिंसाको बाटो रोज्नुभयो। अहिले आएर पनि त्यही बाटो तिर लाग्छु भन्नु तपाईको मुर्खता नै हो भन्ने लाग्छ।
देश र जनताको मर्मलाई यदी बुझ्न हुन्थ्यो भने तपाईले पाएको दश वर्षमा के नै गर्नुभयो ? तपाईसँग उतर दिन सक्ने दिमाग छ ? म खुला रुपले भन्छु जनता भन्दा तपाई भिकारी हुनुहुन्छ। किनकि राजनीतिको चलखेलमा पनि नाताबाद घरघराईसीलाई मात्र हेर्ने प्रवृतिले तपाईको घर चल्न र चलाउन सक्नुहुन्छ। सच्चा नेपालीको घर गाउँ शहर र देश चलाउन सक्नुहुन्न ।
मानसिकताको कमी भएका मेरो देशका भुसे नेताहरु दलाल, भ्रष्टचारी, बलत्कारी, देशद्रोही र गद्धार निती अपनाएर कार्यपालिकालाई आफ्नो मुठीमा दबाएर निचोर्न चाहने तपाई नेता होइन देशका दलाल हौ। मतियार जस्तै छन मेरो देशका गद्धारहरु कुर्सीको लागी मात्र मरिमेट्ने नेताहरु हिजो जनतासँग गरेका वाचाहरु खोई ? हिजो हजारौँ जनताहरु मारेर खायौ खोई ? म खुल्ला रुपले भन्छु तपाईहरु देशका गद्धार हुनुहुन्छ भने देशमा भई रहेका बलत्कार भष्टचार तपाईहरु कै उपज हो। देशका चिनारी ढालेर आफ्नो मुर्ति टास्ने कुकुरहरुले हिंड्दा हिंडदै कुकुरले मुतोस तपाईको सालिकमा। देशको रक्षकलाई मार्नेहरुलाई सांसद भवनमा संसद पद सपथ खुवाउने तपाई देशका गद्धार शासक हौ भने कुरा प्रमाणित भएको छ । हामी गाई भैसीको मासु नखाने मान्छे अहिलेको यो लुटतन्त्रले थालीमा हालेर मुखमा कोच्याएको छ। आफनो स्वभिमानलाई यो लुटतन्त्रले बिदेशीहरुको जुत्ताको मुनि राखेको छ ।
हामी स्वाभिमानी आम नेपालीहरुलाई जसरी राजाको अन्त गरेको छ त्यसरी नै अहिलेका दक्षिणपन्थी बामदल माओ, कम्युनिष्टहरु र देशका गद्धारहरु तपाईहरुलाई ज्युदै एउटै चिहानमा जलाउने समय आउदैछ ।
कुनै मानमर्यादाको सिमा हुन्छ यदी देश प्रति माया छ भने दारु र भारु डलरमा पालिएका तपाईहरुबाट हामी नेपालीहरुले के नै विश्वाश गर्न सक्छौ ? कुनै उधेश्य नबोकेका मेरा देशका नेताहरु मानसिकता गुमाएका दलाल हुन । अहिले देश विखण्डनको बाटो तिर डोर्याउन दलालहरु मधेस कसरी अलग हुन चाहन्छ हिजोसम्म नेपालमै थियो आज अलगको मुद्दा कहाँबाट उठेको छ ? तपाईहरुसँग उत्तर छ ? एउटै फुलका हामी नेपाली माला भन्छौ तर अहिले किन बिदेशी रणनीति लिएर ७ भागमा बाँड्नुभयो.? कानुन काहाँ छ खोई तपाईको देशको कानुन ?
एउटा बलात्कारीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने शक्ति नभएको सरकारले समुद्रमा जहाँज होईन मुतमा जहाज गुडाउछु भन्नु एउटै हो। धर्म प्रचार हर सरकारी निकायबाट नै भएको छ। कसरी भन्दा सरकारी अस्पताल र सरकारी ठुलो कर्मचारीको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाएर सहि मान्छेलाई गलत बाटोमा डोराउने गर्नुभएको छ। के नेपालको संबिधानमा यी कुरा मान्य छ र ? जनता र देशको बिकाशमा अड्चन बनिरहेका गद्धार नेताहरुलाई पशुपति नाथले सद्बुद्धि देऔस !
कोरोनाको संक्रमणबारे जान्नै पर्ने तथ्यहरु !
बन्दाबन्दिमा बदलिएको यौन जीवन !
कोभिड १९ लाई लक्षित गर्दै मेयर- जनप्रतिनिधि प्रति युवाद्वारा ध्यानाकाषर्ण
के को प्रेस स्वतन्त्रता ? प्रेसको भेषमा विदेशी एजेण्टबाट स्वतन्त्र गर देशलाई !